Nyaya Youpenyu: Kukomborerwa ‘Mumwaka Wakakodzera, Uye Unotambudza’ | Yokudzidza
SARUDZA MUTAURO Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bengali Bicol Bislama Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chuvash Cibemba Cinyanja Croatian Czech Danish Drehu Dutch Efik Estonian Fijian Finnish French Georgian German Greek Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Kannada Kazakh Kikamba Kikaonde Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kongo Korean Latvian Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Marathi Mauritian Creole Maya Mixe (North Central) Mongolian Nepali Norwegian Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Punjabi Quechua (Bolivia) Romanian Russian Samoan Sango Serbian Serbian (Roman) Seychelles Creole Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tajiki Tamil Tatar Telugu Thai Tigrinya Tiv Tok Pisin Tshiluba Turkish Turkmen Turkmen (Cyrillic) Tuvaluan Tzotzil Ukrainian Urdu Uzbek Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wolaita Yoruba Zapotec (Isthmus)
Yakataurwa naTrophim R. Nsomba
NDAKABEREKWA muna March 1930 munzvimbo inonzi Namkumba, iri pedyo neguta reLilongwe munyika yava kunzi Malawi. Hama dzangu dzakawanda dzaishumira Jehovha dzakatendeka. Muna 1942, ndakazvitsaurira kuna Mwari uye ndakabhabhatidzwa mune rumwe rwizi rwunoyevedza. Makore 70 akazotevera, ndakaedza nepandaigona napo kuita zvakakurudzirwa Timoti nomuapostora Pauro paakati, “paridza shoko, shingaira kuriparidza mumwaka wakakodzera, mumwaka unotambudza.”—2 Tim. 4:2.
Kushanya kwakaita Hama Nathan H. Knorr naHama Milton G. Henschel kuMalawi muna 1948 kwakaita kuti ndive nechido chokushumira Jehovha mubasa renguva yakazara. Ndichiri kuyeuka mashoko anokurudzira akataurwa nehama idzi dzainge dzabva kumahofisi makuru eZvapupu zvaJehovha kuBrooklyn, New York. Hama Knorr vakapa hurukuro yaikurudzira chaizvo yaiva nemusoro waiti, “Mutongi Wemarudzi Ose Wokusingagumi.” Taida kusvika 6 000 uye taiteerera hurukuro iyoyo takamira mumadhaka sezvo kwainge kwanaya.
Ndakaonana neimwe hanzvadzi yakanaka chaizvo yainzi Lidasi, yainge yakarerwawo mumhuri yeZvapupu zvaJehovha uye yaidawo basa renguva yakazara. Takaroorana muna 1950 uye pakazosvika 1953, tainge tava nevana vaviri. Kunyange zvazvo tainge tava kurera vana, takasarudza kuti ini nditore upiyona hwenguva dzose. Papera makore maviri, ndakanzi ndishumire sapiyona chaiye.
Pasina nguva, ndakawana ropafadzo yokushanyira ungano ndichishumira semutariri wedunhu. Lidasi ainditsigira, saka ndakakwanisa kuriritira mhuri yangu uye kuitungamirira pakunamata, uku ndichishumira semutariri wedunhu. * Asi chido chedu chaiva chokuti tose tipinde mubasa renguva yakazara. Takanyatsoronga zvinhu zvedu semhuri zvokuti Lidasi akatangawo basa renguva yakazara muna 1960.
Magungano akatisimbisa chaizvo kuti titsungirire miedzo yaiva mberi
Tainakidzwa chaizvo pataishumira hama nehanzvadzi dzedu muungano dzakasiyana-siyana. Basa redunhu rakaita kuti tikwanise kushumira munzvimbo inoyevedza ine makomo eMulanje iri kumaodzanyemba, uye taisvika kumahombekombe kweLake Malawi iyo iri kumabvazuva kwenyika yacho. Mumatunhu ataishumira, takaona vaparidzi vachiramba vachiwedzera uye dzimwe ungano dzichitangwa.
Muna 1962, takapinda Gungano Reruwa raiva nemusoro waiti, “Vashumiri Vane Ushingi.” Pandinofunga nezvemagungano iwayo, ndinoona kuti akabatsira isu tose taiva muMalawi kuti tigadzirire nguva dzakaoma dzaiva mberi. Gore rakatevera racho, Hama Henschel vakauya zvakare kuMalawi uye takava negungano rakaitirwa kunze kweguta reBlantyre. Vanhu vanenge 10 000 vakapinda gungano iroro. Gungano iri rakatibatsira chaizvo kuti tizokwanisa kutsungirira miedzo yaiva mberi.
MWAKA UNOTAMBUDZA UNOSVIKA
Basa redu rakabhanwa uye hurumende yakatora hofisi yebazi
Muna 1964, Zvapupu zvakatambudzwa chaizvo nokuti zvairamba kupindira mune zvematongerwo enyika. Dzimba dzoUmambo dzinopfuura 100 uye misha yeZvapupu inopfuura 1 000 yakaparadzwa. Asi isu takakwanisa kuramba tichiita basa redunhu, kusvikira pakazobhanwa Zvapupu muna 1967 nehurumende yeMalawi. Hofisi yebazi yakatorwa, mamishinari akanzi adzokere kunyika dzawo, uye Zvapupu zvakawanda zvomuMalawi kusanganisira ini naLidasi takaiswa mujeri. Patakazobudiswa, takaramba tichiita basa redunhu asi tichingwarira.
Rimwe zuva muna October 1972, vanhu vanenge 100 veboka rezvematongerwo enyika rainzi Malawi Youth League, vakatanga kufamba vakananga kumba kwedu. Asi mumwe wavo akamhanya akavatangira kusvika akandiudza kuti ndihwande nokuti vaironga kundiuraya. Ndakaudza mudzimai wangu nevana kuti vahwande mumibhanana yaiva pedyo. Ndakabva ndamhanya ndikakwira muzimuti romumango. Ndirimo, ndakaona imba yedu uye zvimwe zvinhu zvedu zvose zvichiparadzwa.
Sezvo hama dzedu dzaisapindira mune zvematongerwo enyika, misha yadzo yakapiswa
Zvapupu pazvakanga zvava kunyanya kutambudzwa, vakawanda vedu takatiza muMalawi. Mhuri yedu yakanogara mumusasa wevapoteri kumavirira kweMozambique kusvika muna June 1974. Panguva iyoyo, ini naLidasi takanzi tishumire semapiyona chaiwo muDómue kuMozambique, pedyo nebhodha reMalawi. Takaramba tichishumira tiri ikoko kusvika muna 1975, Mozambique payakawana rusununguko pakutongwa kwayaiitwa nePortugal. Isu pamwe nezvimwe Zvapupu, takamanikidzwa kudzokera kuMalawi kune vanhu vaye vaititambudza.
Patakadzokera kuMalawi, ndakanzi ndishanyire ungano dzaiva muguta guru reLilongwe. Pasinei nokutambudzwa uye kuoma kwainge kwakaita zvinhu, ungano dzakaramba dzichiwedzera mumatunhu ataishumira.
Pane imwe nguva takapfuura nemuraini raiitwa musangano wezvematongerwo enyika. Vamwe vanhu vaiva pamusangano uyu vakaziva kuti taiva Zvapupu zvaJehovha uye vakatiti tigare pamwe nevamwe vechiduku vaiva muchikwata chezvematongerwo enyika chainzi Malawi Young Pioneers. Takanyengetera nemwoyo wose kuna Jehovha kuti atibatsire uye atitungamirire panguva iyi yakaoma. Pakapera musangano wacho, vakatanga kutirova. Vamwe mbuya vakauya vachimhanya vachishevedzera vachiti: “Vasiyei kani ndapota! Murume uyu mwana wehanzvadzi yangu. Musiyei aende!” Aitungamirira musangano wacho akabva ati: “Varegei vaende!” Hatinyatsoziva kuti mbuya ivavo vaifungei, nokuti takanga tisina ukama navo. Jehovha anofanira kunge akanzwa munyengetero wedu.
Kadhi rebato rezvematongerwo enyika
Muna 1981 takasanganazve nevamwe vechikwata cheMalawi Young Pioneers. Vakatitorera mabhasikoro edu, mikwende yedu, nemabhokisi emabhuku uye mafaira aiva nezvinhu zvomudunhu. Takapukunyuka tikatizira kumba kwemumwe mukuru wemuungano. Takanyengetera zvakare. Asi tainetseka chaizvo pataifunga nezvezvinhu zvose zvaiva mumafaira avainge vatora. Vakavhura mafaira acho vakaona kuti maiva netsamba dzangu dzaibva kunzvimbo dzakasiyana-siyana dzomuMalawi. Izvi zvakavavhundutsa nokuti vakafunga kuti ndaiva nechinzvimbo muhurumende. Saka vakabva vadzorera zvinhu zvose zvavainge vatitorera, vakanozvisiya kuvakuru vemuungano vaigara munzvimbo iyoyo.
Rimwe zuva taiyambuka rwizi nechikepe. Muridzi wechikepe chacho aiva mukuru mukuru wezvematongerwo enyika womunzvimbo iyoyo, saka akati aida kuona kuti munhu wose aivamo aiva nekadhi rebato here. Paainge ava kusvika pataiva, akaona imwe mbavha yaitsvakwa nemapurisa. Pakabva paita mheremhere, zvokubvunza makadhi zvikabva zvangosiyiwa. Takaonazve kuti Jehovha akatibatsira.
KUSUNGWA UYE KUISWA MUJERI
Muna February 1984, ndaiva munzira kuenda kuLilongwe kunosiya mishumo yaizofanira kuendeswa kuhofisi yebazi yokuZambia. Mumwe mupurisa akandimisa akatanga kusecha bhegi rangu. Akaona mabhuku anotaura nezveBhaibheri, saka akaenda neni kukamba yemapurisa uye akatanga kundirova. Akabva andisunga netambo akandiisa muimba yaiva nevamwe vasungwa. Vanhu ava vainge vabatwa vaine zvinhu zvavainge vaba.
Zuva rakatevera racho, mukuru wemapurisa akaenda neni mune imwe imba uye aida kuti ndisaine rimwe pepa raainge anyora kuti: “Ini Trophim R. Nsomba, ndarega kuva Chapupu chaJehovha kuti ndisunungurwe.” Ndakamuudza kuti: “Handina kungogadzirira kusungwa chete asi ndakatogadzirirawo kufa. Ndichiri Chapupu chaJehovha.” Ndakaramba kusaina pepa racho. Izvi zvakagumbura mupurisa wacho uye akarova dhesiki zvine simba nechibhakera, zvokuti mumwe mupurisa aiva mune rimwe kamuri akauya achimhanya achida kuona kuti chii chainge chaitika. Mukuru wemapurisa wacho akamuudza kuti: “Murume uyu ari kuramba kusaina kuti haasisiri Chapupu. Saka murege asaine kuti achiri mumwe weZvapupu zvaJehovha uye tichamuendesa kuLilongwe kwaachanosungwa netambo.” Nguva yose iyi, mudzimai wangu ainetseka kuti chii chaiitika kwandiri. Pashure pemazuva mana, dzimwe hama dzakazomuudza kwandaiva.
Ndakabatwa zvakanaka pandakasvika kukamba yemapurisa yokuLilongwe. Mukuru wemapurisa akandipa ndiro yaiva nemupunga achibva ati: “Idya nokuti wakasungirwa Shoko raMwari. Vamwe vari muno imbavha.” Akabva andiendesa kujeri rokuKachere uye ndakaita mwedzi mishanu ndiriko.
Mukuru wejeri akafara chaizvo nokuuya kwangu nokuti aida kuti ndiite mufundisi mujeri iroro. Akabvisa mumwe akanga ari mufundisi, akamuudza kuti: “Handichadi kuti udzidzisezve Shoko raMwari pano, nokuti wakakandwa mujeri nepamusana pokuba muchechi mako!” Saka ndakapiwa basa rokudzidzisa Bhaibheri vhiki yoga yoga pamisangano yairongerwa vasungwa.
Nokufamba kwenguva, zvinhu zvakazowedzera kuipa. Vakuru vakuru vepajeri vakandibvunzurudza vachida kuziva kuti muMalawi maiva neZvapupu zvingani. Havana kugutsikana nezvandakavaudza, saka vakandirova kusvikira ndafenda. Pane imwe nguva vaida kuziva kuti mahofisi edu makuru aripi. Ndakavaudza kuti, “Mabvunza mubvunzo uri nyore, regai ndikuudzei.” Vakafara chaizvo uye vakabva vabatidza tepirekodha yavo. Ndakavaudza kuti mahofisi makuru eZvapupu zvaJehovha anotaurwa nezvawo muBhaibheri. Vakashamiswa uye vakandibvunza kuti, “Papi pacho muBhaibheri?”
Ndakavapindura kuti, “Pana Isaya 43:12.” Vakavhura Bhaibheri vachibva vanyatsoverenga panoti: “‘Imi muri zvapupu zvangu,’ ndizvo zvinotaura Jehovha, ‘uye ini ndini Mwari.’” Vakaverenga ndima iyoyo katatu. Vakabva vandibvunza kuti: “Mahofisi makuru eZvapupu zvaJehovha anganzi sei ari muno muBhaibheri kwete kuAmerica?” Ndakavaudza kuti: “Zvapupu zvaJehovha zviri kuAmerica zvinoonawo rugwaro urwu serunotsanangura kune mahofisi avo makuru.” Sezvo ndisina kuvaudza zvavaida kunzwa, ndakabva ndaendeswa kujeri rinonzi Dzaleka riri kuchamhembe kweLilongwe.
KUKOMBORERWA MUMWAKA UNOTAMBUDZA
Pandakasvika kujeri rinonzi Dzaleka muna July 1984, maiva nezvimwe Zvapupu 81. Jeri iri rakanga rakazarisa, zvokuti panguva yokurara, vasungwa 300 vaivamo vairara pasi vakatsvikinyidzana. Nokufamba kwenguva, takaronga nezvimwe Zvapupu kuti tiungane mumapoka maduku tichikurukura rugwaro rumwe chete pazuva. Izvi zvaitikurudzira chaizvo.
Mukuru wejeri akabva atiparadzanisa nevamwe vasungwa. Mumwe mugadhijeri akatiudza tiri pedu toga kuti: “Hurumende haikuvengii. Tiri kukugarisai mujeri nokuda kwezvikonzero zviviri: Hurumende iri kutyira kuti mungaurayiwa nemaYoung Pioneers, uye sezvo muchiparidza kuti kune hondo ichauya, hurumende iri kutyira kuti masoja ayo achatiza nepamusana pekutya hondo iyoyo.”
Hama dziri kubva kunotongwa mudare redzimhosva
Muna October 1984, tose takapinda mudare. Takatongerwa kugara mujeri kwemakore maviri. Takaiswazve mujeri nevanhu vasiri Zvapupu. Asi mukuru wejeri akapa chiziviso kuvanhu vose chokuti: “Zvapupu zvaJehovha hazvisvuti fodya. Saka imi magadhijeri, musavanetsa nekuvakumbira fodya uye musavatuma kunotora marasha okubatidzisa midzanga yenyu. Ava vanhu vaMwari! Vose vanofanira kupiwa zvokudya kaviri pazuva, sezvo vasina mhosva yavakapara, asi vari mujeri nepamusana pezvavanotenda zviri muBhaibheri.”
Kuva nezita rakanaka kwakatibatsirawo pane zvimwe. Kana kwasviba kana kuti kuchinaya, vasungwa vaisabvumirwa kufamba-famba. Asi isu taibvumirwa nokuti vaiziva kuti hatitizi. Rimwe zuva, mumwe mugadhijeri akarwara paaitirinda tichishanda muminda. Takamutakura tikadzoka naye kuti arapwe. Vakuru vejeri vaiziva kuti tiri vanhu vakavimbika. Saka nokuramba tiine mufambiro wakanaka, takakomborerwa kuona zita raJehovha richikudzwa nemagadhi aitirinda.—1 Pet. 2:12. *
MWAKA WAKAKODZERA UNOVAPO ZVEKARE
Musi wa11 May 1985, ndakabudiswa mujeri reDzaleka. Ndakafara chaizvo kuvazve pamwe nemhuri yangu! Tinoonga Jehovha nokuti akatibatsira kuti tirambe takavimbika kwaari munguva iyoyo yakaoma. Kana tikafunga nezvenguva iyoyo, tinonzwa sezvakaita muapostora Pauro paakanyora kuti: “Hatidi kuti muve vasingazivi pamusoro pokutambudzika kwakatiwira . . . Takanga tisisina kana chokwadi kunyange noupenyu hwedu. Chokwadi, takafunga mumwoyo medu kuti takanga tatongerwa rufu. Izvi zvakaitika kuti chivimbo chedu chive muna Mwari anomutsa vakafa, kwete matiri. Iye akatinunura pachinhu chakakura kudai sorufu uye achatinunurazve; uye tariro yedu iri maari kuti acharamba achitinunura.”—2 VaK. 1:8-10.
Hama Nsomba nemudzimai wavo, Lidasi, vari pamberi peImba yoUmambo muna 2004
Chokwadi dzimwe nguva taiona sokuti hatichararami. Asi tairamba tichikumbira Jehovha kuti atipe ushingi uye uchenjeri kuti tirambe tichizvininipisa zvoita kuti zita rake guru rikudzwe.
Jehovha akatikomborera pataiita basa rake mumwaka wakakodzera uyewo unotambudza. Takafara chaizvo kuona hofisi yebazi ichipera kuvakwa kuLilongwe muna 2000 uyewo kuona kuvakwa kweDzimba dzoUmambo dzinopfuura 1 000 muMalawi mose! Ini naLidasi tinoshamiswa chaizvo patinofunga nezvemakomborero iwayo zvokuti tinofunga kuti tiri kurota! *
^ ndima 7 Hama dzine vana vaduku hadzichanzi dzishumire mubasa redunhu.
^ ndima 30 Kana uchida kuona mamwe mashoko okutambudzwa kwakaitwa Zvapupu kuMalawi ona Bhuku Regore reZvapupu zvaJehovha ra1999, reChirungu, mapeji 171-223.
^ ndima 34 Nyaya ino payainge ichiri kunyorwa kuti izobudiswa, Hama Nsomba vakafa vava nemakore 83.
Jehovha Akandikomborera Kupfuura Zvandaitarisira